Indlela yokufaka FSX on Windows 8 / 8.1 / 10?
Ukufakela FSX (zonke iinguqulelo) kwi Windows 8 / 8.1, landela la manyathelo:
1- Faka FSX ngokuqhelekileyo kunye DVD.
2- Xa ufakelo phezu, ekunene nqakraza «fsx.exe» (ningawufumana khona apha: C: \_ Iifayile yeNkqubo (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X). Apha, khetha «soGuquguquko» isithuba kwaye wawuxhoma window njengoko kubonisiwe apha ngezantsi:
3- Zikhuphelele 32 amasuntswana inguqulelo « UIAutomationCore », UnZip ifayile kwaye usincamathelise kwi engundoqo eneenkcukacha FSX ngayo (C: \_ Iifayile yeNkqubo (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_). Iya lungisa ingxaki eengozi uzicinge FSX.
Ke kaloku, emva kwezi ukunyathela, FSX kufuneka abazinzileyo Windows 8 / 8.1 and 10